एयर प्रदूषण कुकुर ब्लग - कुकुर स्वास्थ्यको बारेमा अधिक जान्नुहोस् - पृष्ठ - - K8 मास्की राम्रो एयर टीम द्वारा
अक्टोबर 02, 2019 क्यालिफोर्निया र दक्षिण पूर्व सामान्य वन्य क्रियाकलाप गतिविधि माथि आशा गर्दछ
सेप्टेम्बर 27, 2019 नयाँ वायु प्रदूषण अनुप्रयोग वाईल्ड फायर चेतावनी प्रणाली पनि हो
सेप्टेम्बर 26, 2019 K9 मास्कको साथ पाल्तु जनावरहरूको लागि अमेजन एफिलियट मार्केटिंग
क्यालिफोर्निया र दक्षिण पूर्व सामान्य वन्य क्रियाकलाप गतिविधि माथि आशा गर्दछ
अक्टोबर 02, 2019
अक्टूबर 1 राष्ट्रिय इन्टर्जेन्सी फायर सेन्टरमा पूर्वानुमानी सेवा खण्डले जनवरीको माध्यमबाट अक्टूबरको लागि उनीहरूको वाइल्याण्ड फायर सम्भावित आउटलुक जारी गर्‍यो। डाटा दस भौगोलिक क्षेत्र भविष्यवाणी सेवा इकाइहरु र राष्ट्रिय भविष्यवाणी सेवा इकाई को संचयी पूर्वानुमान प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यदि एनआईएफसीको विश्लेषण सहि छ भने दक्षिणपूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यालिफोर्नियाका क्षेत्रहरूमा डिसेम्बर मार्फत वन्य आगोको लागि सम्भावित औसत क्षमता भएका क्षेत्रहरू हुनेछन्। तल: अर्को धेरै महिनाको लागि NIFC कथन रिपोर्टबाट एक अंश; NIFC को अधिक मासिक ग्राफिकल आउटलुकहरू; NOAA को तीन महिना तापमान र वर्षा पूर्वानुमान; सूखा मोनिटर; वनस्पति हरियाली नक्शा; कीच-बाइराम सूखा सूचकांक।
एनआईएफसीबाट: "दुबै [क्यालिफोर्निया र दक्षिणपूर्व] माथि ठूलो ठूलो आगोको सम्भावित क्षेत्रहरू पतनमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, विशेष गरी दक्षिणपूर्वमा जहाँ अप्पालाचियनमा खडेरी आयो। क्यालिफोर्नियामा, ईन्धन मध्य आगो र तल्लो उचाइहरूमा महत्वपूर्ण आगोको मौसम स्थितिको रूपमा आगोको क्रियाकलापमा ग्रहणशील हुन्छ।
घाँस बाली बाक्लो छ। यो अक्टुबर, नोभेम्बर, र डिसेम्बर मा प्रमुख शीर्षक एक चिंता रहनु पर्छ। दक्षिणपूर्वमा निरन्तर सुख्खा मौसमले ईन्धनलाई सुक्खा बनाउन अनुमति दिनेछ जसले ठूलो अग्नि सम्भावनालाई बिस्तारै बढ्न दिनेछ जबसम्म डिसेम्बर र जनवरीमा मौसम मौसम बित्न थाल्दैन। ”
नयाँ वायु प्रदूषण अनुप्रयोग वाईल्ड फायर चेतावनी प्रणाली पनि हो
Breezometer, एक नि: शुल्क अनुप्रयोग जुन वास्तविक-समयको वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान गर्दछ, घोषणा गर्‍यो कि यसले फायर अलर्टहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई हानिको बाटोमा छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। वाइल्डफायरहरू पहिले भन्दा बढि र बारम्बार हुँदै गइरहेका छन्, र हावाको क्वालिटीमा पनी लामो प्रभाव हुन सक्छ। फायर अलर्टहरू नासा र स्थानीय स्रोतहरूको जानकारीमा आधारित छन् र अनुप्रयोगको आफ्नै एल्गोरिदमसँग मिलेर - धुम्रपान कुन दिशामा यात्रा गरिरहेको छ र वायुको गुणस्तरमा यसको प्रभाव पार्दछ भन्ने निर्धारण गर्न सक्दछ।
अनुप्रयोगको माध्यमबाट, प्रयोगकर्ताहरू जो २० देखि miles० माईल जंगलको आगोको बीचमा बस्दछन् यसको प्रगतिमा समसामयिक अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। वन्य आगो प्रदूषण मात्र भर्खरको यात्राको लागि पत्ता लागेको थियो ...
K9 मास्कको साथ पाल्तु जनावरहरूको लागि अमेजन एफिलियट मार्केटिंग
सेप्टेम्बर 26, 2019
अमेजन सम्बद्ध विपणन पाल्तु जनावर उत्पादनहरू र K9 मास्क उनीहरूको वेबसाइट, ब्लग, वा इन्टरनेट च्यानलमा पैसा कमाउन चाहने जो कोहीलाई उपलब्ध छ। तपाइँको सिर्जना गर्न साइन अप गर्नुहोस् अमेजन सम्बद्ध खाता। तपाईंको अनौंठो अमेजन एफिलिएट लिंक प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा इन्टरनेट च्यानलमा K9 मास्कको प्रचार गर्न पैसा कमाउन सक्षम हुनुहुनेछ। पैसा कमाउँदा कुकुर मालिकहरूका लागि स्वस्थ विकल्पहरूको प्रचार गर्नुहोस्।
तपाईं यी जस्तो K9 मास्क उत्पादनहरूमा शपिंग लिंकहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र प्रत्येक समयमा पैसा कमाउनुहुनेछ जब कोहीले तपाइँको लिंकमा अमेजनमा उत्पादनहरू खरीद गर्न क्लिक गर्दछ।
K9 मास्क अमेजन सम्बद्ध लिंक का उदाहरण:
अमेजन सम्बद्धको रूपमा पैसा कमाउने दुई कुञ्जीहरू
तपाइँको ब्लग, वेबसाइट, या इन्टरनेट चैनल को लागी लगातार यातायात उत्पन्न गर्नुहोस्।
व्यक्तिलाई केवल तपाइँको सम्बद्ध लिंकहरू वा पोष्टहरूमा क्लिक गर्न आवश्यक पर्दछ र केहि खरीद गर्नुपर्दछ यदि यो तपाईंले लि linked्क गर्नु भएको वस्तु होईन भने।
तपाइँको पाठकहरू र सम्भावित अनुयायीहरूका लागि मूल्यवान संसाधन हुनु वेबसाइट र ब्लग, वा इन्टरनेट च्यानल ट्राफिक प्राप्त गर्न र मद्दत गर्नको लागि सबै महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्। जब कसैले तपाइँको सम्बद्ध लिंक मार्फत क्लिक गर्दछ अमेजनमा खरीद गर्न तपाई एक कमिशन प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अमेजनका साथ पैसा कमाउनुहोस्
धेरै मानिसहरूलाई यो शब्द थाहा छ “अमेजन संबद्ध, "तर अमेजनका साथ पैसा कमाउने असंख्य तरिकाहरू छन्।
ब्यानर विज्ञापन - यो परम्परागत ब्यानर विज्ञापनहरू होइन र प्रायः यस्तो देखिन्छ कि यो छुट्टिँदै छ वा छुट्टिहरूको लागि समयमा एक अनुहार प्राप्त गर्दैछ।.
सीपीएम - तपाइँलाई अवस्थित विज्ञापन नेटवर्क सेटअप आवश्यक छ तर तपाइँसँग एक पटक तपाइँले अमेजनबाट ब्यानर, साइडबार, हेडर, र फुटर विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। अमेजनले तपाइँलाई तपाइँको लागत प्रति मिल (वा प्रति हजार प्रभावहरू लागत) सेट गर्न अनुमति दिन्छ। यदि अमेजनले तपाईंको सेट सीपीएममा खाली ठाउँ पूरा गर्न सक्दैन भने विज्ञापन तपाईंको नियमित विज्ञापन नेटवर्कमा फिर्ता जान्छ।
नेटिभ विज्ञापनहरू - साल भर विभिन्न पटक अमेजन नेटिभ विज्ञापन प्लेटफार्म प्रयोग विशेष चलाउँछ। नेटिभ विज्ञापनहरू अनुकूलन योग्य छ ताकि तपाईं आफूले प्रदर्शन गर्न चाहनुभएको ठ्याक्कक उत्पादनहरूमा राख्नुहुन्छ वा प्रदर्शनको लागि उत्पादनहरूको उप श्रेणीहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
मोबाइल पपओभर - यदि तपाइँ यो विकल्प छनौट गर्नुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको पाठकहरूको अनुभवलाई ध्यान दिनुहुन्छ र पूर्ण कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले तपाइँको आफ्नै साइटमा जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
पृष्ठमा लिंक गर्नुहोस् - केवल एक उत्पादनमा लि of्क गर्नुको सट्टा तपाईं तातो शीर्षक, उत्तम विक्रेता, विशेष प्रस्ताव पृष्ठहरू, वा खोज परिणामहरू लिंक गर्न सक्नुहुन्छ।
मौसमी पदोन्नतिहरू - यो विकल्पले तपाईंलाई तपाईंको ब्लग वा साइटमा स्थिर साइडबार विज्ञापन गर्न अनुमति दिन्छ जुन सयौं बिभिन्न विशेष अफरहरूमध्ये एकलाई बढावा दिन्छ। शिविर गियरको खुला बक्सहरूमा गहिरो छुटको लागि पाल्तु खाना डेलिभरीका लागि प्राइम पन्त्रीबाट सबै। एक खोजी खोज्न को लागी एक विकल्प खोज्न को लागी तपाइँ को लागी अर्थ बनाउँछ वा श्रेणिहरु को माध्यम बाट स्क्रोल को लागी हेर्नुहोस् के वर्तमान मा छ। परम्परागत रूपमा, अमेजनले नोभेम्बरमा छुट्टी-थिम भएको पाल्तु जनावर पदोन्नतीहरू सिर्जना गर्दछ।
Bounties - अमेजनसँग सदस्यता-आधारित उत्पादनहरूको संख्या छ जुन उनीहरूलाई प्रचार गर्नको लागि मद्दत चाहन्छन्। यिनीहरूलाई बढुवा भनिन्छ। तपाईं आफ्नो ब्लगमा कोड प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको पाठकहरूलाई परीक्षण प्रस्तावको फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। जब ती प्रस्ताव को लागी साइन अप हुन्छ तपाईले एक सेट भुक्तान पाउनुहुनेछ। बाउन्टीहरू मौसमी रूपले परिवर्तन हुन्छ त्यसैले प्राय: फेरि जाँच गर्नुहोस् कि केहि नयाँ आयो कि हेर्नुहोस्।
10 फास्ट तथ्य तथ्यहरू अमेजन सम्बद्धहरूका बारे
कृपया निश्चित गर्नुहोस् जब तपाइँको ब्लग पोष्ट वा वेबसाइटमा अमेजन सम्बद्ध लिंक साझा गर्नुहोस् जुन तपाइँको न्यूजलेटर वा आरएसएस फिडमा देखा पर्दैन। तपाईको ब्लग पोष्टहरू पढ्नका लागि पूर्ण क्लिकका लागि थप विकल्पका लागि स्विच गर्नु यो उत्तम कारण हो। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले आफ्नो पोष्टमा सम्बद्ध लिंकहरू समावेश गर्नुभयो भने तिनीहरू पढ्न थप लिंकहरू तल तल देखा पर्दछ। साथै, तपाईं ईमेक्स वा पीडीएफमा अमेजन सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईका ब्लग पोष्टहरूमा ईबुक र पीडीएफमा लिंक गर्न सक्नुहुनेछ जुन अमेजन एफिलियट लिंकहरू समावेश गर्दछ (फेरि, पोष्टहरूमा उचित खुलासाको साथ)।
जब तपाईं फेसबुक, ट्विटर, र इन्स्टाग्राममा स्वतन्त्र लिंकहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ कृपया सावधान हुनुहोस् कि अमेजन सम्बद्ध कार्यक्रम नीति Pinterest मा साझा गर्नमा थोरै कम स्पष्ट छ। यसको लागि हामी सिफारिस गर्दछौं कि सेवा परिवर्तनका सर्तहरू नभएसम्म पिनटेरेस्टमा साझेदारी नगर्नुहोस्। फेसबुक र ट्विटर जस्ता सोशल मिडिया प्लेटफॉर्ममा साझेदारी गरिएका लिंकहरूको उचित खुलासा हुन अनिवार्य छ।
तपाईंको ब्लग र सोशल मिडियामा साझेदारी गर्दा, कृपया पूर्ण रूपमा खुलासा गर्न सम्झनुहोस्।
तपाईंसँग उपहार कार्ड वा प्रत्यक्ष जम्मा मार्फत भुक्तान हुने विकल्पहरू छन्। जे भए पनि, तपाइँले न्यूनतम N 10 आयमा भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि त्यो एक महिना वा छ महिना लाग्छ भने, भुक्तानी तपाईंको खातामा जम्मा हुनेछ। यदि तपाईं चेक प्राप्त गर्न रुचाउनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् चेकमा भुक्तान हुने छैन जबसम्म तपाईं payment 100 भुक्तानीमा स in्कित हुनुहुन्न।
कुनै पनि ब्लग पोष्टमा विशेष गरी सम्बद्ध लि with्कहरूको साथ कार्यको लागि कडा कल आवश्यक छ।
फेसबुकमा ह्यान्डशेक उपकरणको सम्बन्धमा, यस लेखनको रूपमा तपाईले अमेजनलाई ट्याग गर्नु हुन्न। तपाइँले पदोन्नति गर्दै हुनुभएको पोष्टमा ब्रान्ड ट्याग गर्नुपर्छ। तपाईंले राम्रोसँग खुलासा गर्न पनि आवश्यक छ।
तपाईंको ब्लगमा एक सम्बद्ध लिंक साझा गर्दा, यो एक nofollow लिंक हुनुपर्दछ।
तपाईको अमेजन एफिलियट ड्यासबोर्डमा पदोन्नतीहरू र बाउन्टीहरू हेर्नुहोस्। पदोन्नतिहरूको समयावधि सकिन्छ, तर प्राय जसो केसहरूमा बाउन्टीहरू गर्दैनन्। यदि तपाईं अमेजनको साथ यस प्रकारको सम्बद्ध अवसरहरू प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाईं या त स्प्रेडशीट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ म्याद समाप्त हुने पदोन्नतिहरू ट्र्याक गर्न र / वा तपाईं 'यो सेट गर्नुहोस् र बिर्सनुभयो' विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पाठकहरूलाई विकल्प दिनुहोस्: यदि तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने के Mas मास्क देखाउनुभयो भने, ब्लग पोष्टहरूमा विज्ञापन प्रयोग गरेर उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको मास्क आकार र एयर फिल्टर दिनुहोस्। वा तपाईले आफ्नो पाठलाई हाइपरलि can्क गर्न सक्नुहुन्छ अनौंठो सम्बद्ध खाता प्रयोग गरेर जस्तै केहि भन्दै, "तपाईको कुकुरका लागि उत्तम हावा प्रदूषण समाधान।"
यदि तपाईंले यो बनाउनुभयो भने, तिनीहरू आउनेछन्। व्यक्तिगत रूपमा, मैले मेरो शीर्ष 10 पोष्टहरू उचित खुलासाको साथ अमेजन सम्बद्ध पोष्टहरू सेटअप गर्दछ किनकि Google एनालिटिक्सले मलाई उनीहरू मेरो ब्ल्गमा सब भन्दा बढी बेचिएका पोस्टहरू हुन् भन्छन्। त्यसो गर्दा, मैले सिफारिस गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष रूपान्तरण देखेको छु। याद गर्नुहोस्, जबसम्म कसैले 24 घण्टा भित्र क्लिक गरेको लिंकबाट अमेजनमा तपाईं मार्फत क्लिक गर्दछ र तपाईंबाट केहि खरीद गर्दछ, तपाईंले आयोग पाउनुहुनेछ।
बोनस Amazon सम्बद्ध युक्ति
समय-समयमा तपाईंको ड्यासबोर्ड जाँच गर्नुहोस्। म मेरो ड्यासबोर्ड साप्ताहिक जाँच गर्दछु, तर मलाई थाहा छ मानिसहरू जो दैनिक जाँच गर्छन्। व्यक्तिले के खरीद गरिरहेका छन् र सम्बन्धित उत्पादनहरू अनुसरण गरेर, तपाईं सामग्री निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जुन यस डेटाको वरिपरि बोध हुन्छ। तपाईंको सम्बद्ध ड्यासबोर्ड भित्र क्लिकहरू र अर्डर गरिएको वस्तुहरू जाँच गर्नुहोस् र बिक्री र आय ट्र्याक गर्नुहोस्। तपाईं एक व्यवसाय मालिक हुनुहुन्छ, त्यसैले हाकिम जस्तै तपाईंको व्यवसायको यस पक्ष को रूप मा काम गर्नुहोस्!
बाहिर लात नहुनुहोस्
अमेजन सम्बद्ध कार्यक्रम बाट लात हान्ने धेरै तरिकाहरू छन्। तपाईंले प्रोग्राम काम गर्न आवश्यक छ कि व्यक्तिहरू वास्तवमा तपाईंको लिंकहरूमा क्लिक गर्दै। अमेजनले सहबद्धहरू राख्दैनन् जो उनीहरूको तल्लो रेखामा योगदान गरिरहेका छैनन्: बिक्री।
अमेजन कार्यक्रम नीतिहरु
सँधै तपाईको जाँच गर्नुहोस् अमेजन सम्बद्ध सेवाका सर्तहरू कुनै परिवर्तन र / वा अपडेटहरूको लागि।
घरपालुवा जनावर उत्पादनहरूले आठ प्रतिशत मानक शुल्क प्राप्त गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईले साझेदारी गर्नुहुने जुन पाल्तु जनावर उत्पादनहरूमा पर्दछ तपाईंले बिक्रीमा percent प्रतिशत प्राप्त गर्नुहुनेछ।
किन्डल पुस्तकहरू निःशुल्कमा अमेजन सम्बद्ध लिंक साझा गर्दा सावधान रहनुहोस्। यदि तपाईं धेरै धेरै लि share्कहरू साझेदारी गर्नुहुन्छ वा त्यो तपाईंको सबै पाठकहरू क्लिक गर्दै र "खरीद गर्दै छन्" भने, तपाईंलाई त्यस महिनाको लागि तपाईंको सम्बद्ध र बाउन्टी भुक्तानीहरूबाट लक गर्न सकिन्छ। नियमित किन्डल पुस्तकहरू वा किन्डल पुस्तकहरू जुन छुट छ तर नि: शुल्क छैन साझा गर्न ठीक छ र तपाईंलाई यस कोटीमा पर्दैन।
यदि तपाईंसँग हाल बहु अमेजन एफिलियट खाताहरू छन् ताकि तपाईं युके र क्यानाडाबाट आएका पर्यटकहरूको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ अब तपाईं वनलिंक सुविधाको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यसले तपाइँको खाताहरू लि links्क गर्दछ र तपाइँ सबैको लागि एक कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। OneLink कोड तपाईंको आगन्तुकलाई उनीहरूको स्थानीय अमेजन स्टोरमा लैजान्छ आइटम खरीद गर्न को लागी।
एक अमेजन एफिलियट खाताको लागि साइन अप गरेर आज पैसा कमाउन सुरू गर्नुहोस्। तपाईंको सामग्री काम गर्नको लागि कुकुरको बारेमा राख्नुहोस्।
वायु प्रदूषणले तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई कसरी प्रभाव पार्छ
व्यक्तिहरू मात्र त्यस्तो छैनन् जो वायु प्रदूषणको जोखिमबाट खराब प्रभावहरू भोग्न सक्दछन्। धेरै घरपालुवा जनावरहरूलाई उनीहरूको जनावरमा वायु प्रदूषणले पार्ने असरहरूको बारेमा चिन्ता छ, र वैज्ञानिकहरूले हावा प्रदूषणको जोखिममा रहेका घरपालुवा जनावरहरूको लागि सम्भावित जोखिमहरू अध्ययन गर्न थालेका छन्।
अनुसन्धानले मानव वायु प्रदूषणका खतराहरू पुष्टि गरेको छ। अत्यधिक वायु प्रदूषणको प्रभावमा परेका व्यक्तिहरूमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू बढ्ने जोखिम हुन्छ जस्तै घरघर्रा, खोक्रा, सास लाग्ने समस्या, र छातीको जकडापन। हृदय रोग वायु प्रदूषणको जोखिममा जोडिएको अर्को सम्भावित स्वास्थ्य समस्या हो। पूर्व-अवस्थित हृदय रोगको साथसाथै वृद्ध मानिस र साना बच्चाहरूलाई प्रदूषणको जोखिमबाट अकाल मृत्यु हुने जोखिम पनि हुन सक्छ।
वायु प्रदूषण को स्रोतहरु
वायु प्रदूषण धेरै बिभिन्न स्रोतहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। जंगल आगोको धुवाँबाट धुवाँ, सवारी सवारी ट्राफिक, पावर प्लान्ट्स, निर्माण, कोइला र पेट्रोल जलेको। घरहरू स्रोतबाट प्रदूषणले भरिन सकिन्छ जस्तै काठको स्टोभ र फायरप्लेसहरू, सुर्तिजन्य धुम्रपान, र खाना पकाउन। सहरी क्षेत्रमा बस्ने घरपालुवा जनावरहरू धुवाँ र निकास प्रदूषकहरूसँग बढी जोखिममा पर्ने र जोखिम बढी हुन्छन्, जबकि ग्रामीण इलाकाहरूमा बस्ने जनावरहरूलाई हर्बिसाइड्स, फides्गीसाइड्स र कीटनाशकको ​​स्प्रेको कारण रसायनको खतरामा पर्न सक्छ।
वायु प्रदूषणको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन
अध्ययनले देखायो कि घरपालुवा जनावरहरूले चुरोट पिउनेहरूको साथमा स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ, सायद एउटै घरमा बस्ने मानिसहरूका लागि भन्दा बढी। यसको कारण यो हो कि घरपालुवा जनावरले अधिक समय फ्लोरको छेउमा बिताए, जहाँ धुवाँको सान्त्वना बढी छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानका अनुसार धूम्रपान रहित घरहरूमा बस्ने बिरामीहरूको तुलनामा दोस्रो धुवाँको संपर्कमा आएका बिरालाहरूले फोक्सोको कार्य घटाएको देखिएको छ। वैज्ञानिकहरूले सामान्य इनडोर गतिविधिहरू जस्तै धुम्रपान र सफा गर्ने वस्तुहरूको प्रयोग र कुकुरहरूमा केही क्यान्सरहरू बीचको सम्बन्ध पनि अन्वेषण गरिरहेका छन्।
घरपालुवा जनावरहरूलाई बाहिरका वायु प्रदूषणबाट पनि जोखिम हुन्छ। मेक्सिको सिटीमा कुकुरहरूको भर्खरै गरिएको अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले स्थानीय कुकुरहरूको दिमागको जाँच गरे कि उनीहरू सहरका कुकुरहरूको दिमागसित तुलना गर्न कम प्रदूषण भएका। मेक्सिको सिटीमा बसोबास गर्ने कुकुरहरूको दिमागले इन्फ्लेमेसन, एमाइलोइड पट्टिका र न्यूरोफाइब्रिलरी ट्या t्गलहरू देखायो जुन मानवमा अल्जाइमर रोगसँग सम्बन्धित छ।
म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालय र टुफ्ट्स विश्वविद्यालय कमिings्ग्स स्कूल अफ मेडिसिनद्वारा गरिएको अर्को अध्ययनमा एक्सएनयूएमएक्स कुकुर मालिक र उनीहरूले कीटनाशक प्रयोग प्रयोग गरे। परिणामहरूले देखाए कि कुकुरहरू मध्ये एक तिहाइमा क्यानाइन मलिग्नन्ट लिम्फोमा थियो, क्यान्सरको एक प्रकार। अध्ययनले यो पनि देखायो कि कुकुरहरूले लिम्फोमा हुने 700 प्रतिशत बढी हुने सम्भावना थियो यदि मालिकहरूले उनीहरूको पछाडिको कीटनाशक प्रयोग गरे।
इनडोर वा आउटडोर प्रदूषकहरूको सम्पर्कमा हुँदा बिरालाहरूले पनि दमको सम्भावना बढी पाए। घरहरूमा काठको दाउराले जलाउने आगो जलाउने ठाउँमा वा धुम्रपान हुने घरमा पाइने लाइनहरू प्राय: फोक्सोको कार्यमा उल्लेखनीय कमी भएको पाइन्छ।
वायु प्रदूषणको लागि घरपालुवा जनावरहरूको प्रदर्शन लाई कम गर्न कदम चाल्दै
किनकि धेरै घरपालुवा जनावरले तिनीहरूको धेरैजसो समय घरको भित्र वा घरको आँगनमा बिताउँछन्, मालिकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि दुवै भित्र र बाहिर वायु प्रदूषणको जोखिमलाई कम गर्न कदम चाल्नु।
हवा फिल्टरहरू प्राय: परिवर्तन गर्नुहोस्।
कपाल र अन्य प्रदूषकहरू हटाउन बारम्बार भ्याकुम।
घर भित्र धुम्रपान नगर्नुहोस्।
रासायनिक रहित सफाई उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस् जब सम्भव हुन्छ।
कारपूलि, गरेर, बसमा चढेर वा साइकल चलाएर सम्भव भए कार्बन उत्सर्जन घटाउनुहोस्।
घरपालुवा जनावरको बाहिरी व्यायामको लागि क्षेत्र छनौट गर्नुहोस् जहाँ हवा सफा छ (राजमार्गबाट ​​टाढा)।
यार्डमा रसायन मुक्त उत्पाद प्रयोग गर्नुहोस् जब सम्भव हुन्छ।
कुकुर वायु प्रदूषण फिल्टर मास्क
हाम्रो कुकुर प्रदूषण मास्क चरम वातावरणको लागि ईन्जिनियर गरिएको छ। हामी प्रयोग गर्छौ N95 र PM2.5 कुकुर प्रदूषण मास्क एयर फिल्टर सक्रिय कार्बन एयर फिल्टर सहितको संरक्षण। K9 मास्क कुकुर थूथन फिल्टर टेक्नोलोजीले धुवाँ, धुवाँ, उत्सर्जन, मोल्ड, एलर्जी, विष, रसायन र ब्याक्टेरियाबाट बचाउँछ। कुकुरका लागि अद्वितीय रूपमा कुकुर थूलीको आकार फिट गर्न र कुकुरलाई चरम वायु प्रदूषणबाट बचाउनको लागि सिर्जना गरिएको हो। K9 मास्कहरू धोउन योग्य छन् र शुद्ध एयरको लागि एयर फिल्टर रिफिलहरू छन् जब तपाईंको कुकुरले यसलाई छोड्दछ हरेक समय। तपाईंको कुकुरका लागि सफा हवा छनौट गर्नुहोस्।
घरपालुवा जनावर र हवा प्रदूषणको बारेमा अधिक:
तपाईंको कुकुरलाई जंगल आगोको धुवाँ र नराम्रो हावा गुणवत्ताबाट जोगाउँदै: जब बाहिरी एयर क्वालिटी कमजोर छ, घरपालुवा जनावरहरूलाई सकेसम्म भित्र राख्नुहोस् र विन्डोज नखोल्नुहोस्।
इन्डोर एयर प्रदूषण र घरपालुवा जनावरहरू: खतराहरू: घरपालुवा जनावरहरूले आँखाको जलन र साइनसको ईन्डोर वायु प्रदूषणको छोटो अवधिको जोखिमबाट अनुभव गर्न सक्दछन्।
तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई इनडोर एयर प्रदूषणबाट जोगाउँदै: अस्थिर जैविक यौगिकहरू सफाई उत्पादनहरू, एयर फ्रेसनरहरू र कीटनाशक औषधिहरूमा उपस्थित हुन सक्छन् जसले घरपालुवा जनावरहरूलाई हानी पुर्‍याउँछ।
हावा प्रदूषणबाट तपाईंको घरपालुवा जनावरहरू कसरी बचत गर्ने: घरेलु घरपालुवा जनावरहरू दमको विकास गर्न सक्दछन् जब तिनीहरू लगातार वायु प्रदूषणको सामना गर्छन्।
आगो एयर गुणवत्ता: तपाईं र तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको लागि स्वास्थ्य सल्लाहहरू (भिडियो): घरपालुवा जनावरहरूलाई भित्रै राख्नुहोस् जब बाहिरी वायु गुणस्तर वन्य फायरले सम्झौता गरेको छ।
म धुवाँ बाहिर गन्ध आउँछु: के यो मेरो कुकुर बाहिरको लागि सुरक्षित छ? वायु गुणस्तर सूचका Consult्क थाहा पाउन कि यो तपाईंको घरपालुवा जनावर बाहिर छ सुरक्षित छ परामर्श गर्नुहोस्।
जंगल आगोको धुवाँ र पशुहरू: वन्य आगोबाट हावामा धुवाँले जनावरहरूका लागि स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
घरभित्र वायु प्रदूषण र घरपालुवा जनावरहरूमा श्वासप्रश्वासको रोग: सुर्तिजन्य धुँवा, धूप, सफा रसायनिक, र अन्य इरेंटन्टहरूले घरपालुवा जनावरहरूलाई उनीहरूको लागि खतरा निम्त्याउन सक्छ।
वन्यजन्तु र घरपालुवा जनावरहरू वायु प्रदूषणबाट प्रभावित हुन्छन्: किनकि धेरै घरपालुवा जनावरहरू प्रायः बाहिर कतै उद्यम गर्दछन, तिनीहरू प्राय: मानिसहरू भन्दा पनि घरभित्रको वायु प्रदूषकहरूमा बढी जोखिममा हुन्छन्।
वायु प्रदूषणले तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई कसरी असर गर्छ? इनडोर वायु प्रदूषण जस्तै धुवाँ र सफाई उत्पादनहरूमा रसायनहरूले घरपालुवा जनावरलाई असर गर्न सक्छ।
तपाईंको प्रिय पाल्तु जनावरमा वायु प्रदूषणको सात हानिकारक प्रभावहरू: हावामा धुवाँले जनावरहरूलाई पनि यसले कसरी असर गर्दछ।
तपाईका घरपालुवा जनावरहरूलाई भित्रै एयरको गुणस्तरमा राख्नुहोस्: पुराना घरपालुवा जनावरहरू र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी स्वास्थ्य मुद्दाहरू सहित घरपालुवा जनावरहरू विशेष गरी हावामा दूषित पदार्थहरूबाट हानि गर्न अति संवेदनशील हुन्छन्।
हावा प्रदूषण घरपालुवा जनावरहरूको लागि खतरनाक छ, पनि: जनावरहरूमा प्राय जसो प्रदूषकहरूसँग समान जोखिमहरू हुन्छन् र कुनै-कुनै अवस्थामा प्रदूषण जनावरहरूका लागि अझ खतरनाक हुन सक्छ।
प्रेम हावामा छ: निश्चित गर्नुहोस् कि यो सफा छ: दुवै मानिस र पशु स्वास्थ्य बचाउन इनडोर वायु सफा राख्नुहोस्।
वन्यजन्तु जोखिम रिपोर्टले अमेरिकाको जंगली आगोको जोखिमलाई हाइलाइट गर्दछ
लगभग 776,000 घरहरू यस बखत वन्य आगोको अत्यधिक जोखिममा
विगत धेरै वर्षहरुमा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा रेकर्ड तोडने वन्य आगोको अनुभव भएको छ। 2018 एक्लोमा, 8,767,492 एकड़ जलेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको 74 सब भन्दा ठूलो शहरहरूको 75 बराबर बराबर। 1900s को बीचमा आधुनिक ऐतिहासिक रेकर्डहरू शुरू भएदेखि यो छैठौं उच्चतम कुल हो।
त्यहाँ त्यस्तो कुनै राज्य छैन जुन पूर्ण रूपमा ज wild्गल आगोको जोखिमबाट स्वतन्त्र छ, तर ऐतिहासिक जंगल आगोको तथ्या indicates्कले संकेत गर्दछ कि 13 पश्चिमी राज्यहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् र जंगलमा आगोको कारण सम्पत्ति क्षति हुने प्रत्याशा छ।
CoreLogic, एक अग्रणी वैश्विक सम्पत्ती जानकारी, विश्लेषण र डाटा-सक्षम समाधान प्रदायक, आज जारी गरियो 2019 वाइल्डफायर जोखिम रिपोर्ट, जसले लगभग fire 776,000 अरब भन्दा बढीको सम्बन्धित पुनर्निर्माण लागत मूल्यको साथ लगभग 221 घरहरू भेटाउँछ ज wild्गलमा आगोको क्षतिको जोखिममा।
क्यालिफोर्नियाको महानगरीय क्षेत्रहरूमा शीर्ष 15 क्षेत्रहरूको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जोखिममा रहेका धेरै घरहरू, लस एन्जलस, रिभरसाइड र स्यान डिएगो महानगरीय क्षेत्रहरू क्रमशः शीर्ष तीन उच्च जोखिम क्षेत्रहरूको रूपमा छन्। यी क्षेत्रहरू शीर्ष 42 महानगरहरूमा उच्च-देखि-चरम जंगल आगोको जोखिममा 15% भन्दा बढी निवासहरूको घर छन् र यस समूहमा कुल पुनर्निर्माण लागत मूल्यको 51% भन्दा बढी दावी गर्दछ।
राज्यको आकार र जनसंख्या घनत्वका साथै वन्यभूमि शहरी इन्टरफेसमा आवासीय विस्तारको लोकप्रियतालाई ध्यान दिएर क्यालिफोर्नियाले उच्च घरदेखि चरम वन्य आगोको जोखिममा रहेका सबैभन्दा घरहरूको सूचीमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। CoreLogic मा जोखिम वैज्ञानिक। "ज wild्गल आगोको चपेटामा पर्ने इलाकामा रहेका घरहरूको उच्च घनत्वले भविष्यको विनाशकारी घटनाहरूको खतरा र अरबौं डलरको क्षतिलाई मात्र बढाउँदछ।"
कोरलोगिक वाइल्डफायर जोखिम रिपोर्टले एरिजोना, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इडाहो, मोन्टाना, न्यू मेक्सिको, नेभाडा, ओक्लाहोमा, ओरेगन, टेक्सास, यूटा, वाशिंगटन र वायोमिंगलगायत पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालै जंगली आगोको क्षतिको जोखिममा रहेको घरहरूको विश्लेषण गर्दछ। रिपोर्टले 2017 र 2018 को महत्त्वपूर्ण जंगल आगोको घटनाहरूको ब्रेकडाउन प्रदान गर्दछ।
रिपोर्टले पत्ता लगायो कि 2018 देशको लागि अर्को रेकर्ड बर्ष हो, 8,767,492 एकड़ जलेको छ - यो आकार संयुक्त राज्य अमेरिकाको 74 सब भन्दा ठूलो शहरहरूको 75 बराबर बराबर छ। 1900s को बीचमा आधुनिक ऐतिहासिक रेकर्डहरू शुरू भएदेखि यो छैटौं उच्चतम कुल हो। क्यालिफोर्निया, नेभाडा र ओरेगनले एक्सएनयूएमएक्समा जलाइएका अधिकांश जमिनहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ, तीनवटा राज्यमा जम्मा भएको 2018 मिलियन एकड जमिनमा। क्यालिफोर्नियामा, 3.72 र 2017 ले राज्यको इतिहासको लगातार दुई बर्षमा अनुभव गरेको भन्दा बढी जंगल आगोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति क्षति पुर्‍यायो।
“विगतका केही वर्षको जंगल आगोको गतिविधिले हामीलाई बताउँछ कि हामी केवल संयुक्त राज्यमा तीव्र आगो र यससँग सम्बन्धित विनाशको निरन्तरता मात्र देखिरहेका छैनौं, तर यी घटनाहरूको बृद्धि भएको छ,” कोरललजिकका वन्यजन्तु अग्निप्रबन्धक शेली येरक्सले भने। "भर्खरका ज wild्गल आगोको लागि जिम्मेवार कारकहरूको निरन्तर उपस्थिति एक अशुभ सूचक हो जुन आउँदै गरेको वर्षहरूले उही रेकर्ड-विनाश बढी देख्न सक्दछ।"
2019 वाइल्डफायर जोखिम रिपोर्टको अन्तर्क्रियात्मक संस्करणको लागि, जसमा नक्शा, चार्टहरू र छविहरू समावेश छन्, भ्रमण गर्नुहोस्। लिङ्क.
2019 वाइल्डफायरहरूको CoreLogic कभरेज अनुसरण गर्न, कम्पनीको प्राकृतिक जोखिम जोखिम सूचना केन्द्र, Hazard HQ visit मा, भ्रमण गर्नुहोस् www.hazardhq.com.
अष्टिन सम्भावित जंगल आगोको क्षतिको लागि संयुक्त राज्यका शीर्ष पाँच शहरहरूमा
A क्यालिफोर्नियामा आधारित बजार अनुसन्धान फर्मबाट नयाँ रिपोर्ट अस्ट्रिन सम्भावित जंगल आगोको क्षतिको कारण सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण लागतहरूको सामना गर्ने शहरहरूको सूचीमा पाँचौं स्थानमा फेला पारे।
CoreLogic संग अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि 53,984 अस्टिनका बासिन्दाहरू एक उच्च-चरम जंगल आगोको जोखिमको रूपमा तोकिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन लगभग $ 16 अरब को पुनर्निर्माण लागतको सम्भावना प्रतिनिधित्व गर्दछ।
चार शहरहरू अस्टिन बाहिर क्यालिफोर्निया मा छन् - लस एन्जलस, रिभरसाइड, स्यान डिएगो र Sacramento।
"अस्टिन बाहिरी क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा स्पष्टतः यो त्यस्तो क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ जहाँ तपाईंसँग धेरै ब्रश छन्, धेरै वनस्पति वृद्धि हुन्छ," कोरललजिक वरिष्ठ जोखिम वैज्ञानिक टॉम जेफरी भन्छन्। "यदि ज wild्गलमा आगो लागेको थियो भने त्यहाँ आगो लाग्ने थुप्रै चीजहरू छन् र त्यसले ठूलो आगोमा परिणत गर्न सक्छ - शारीरिक रूपमा मात्र होइन, तर तीव्र पनि।"
उही प्रतिवेदनका अनुसार 569,811 एकर टेक्सासको 2018 मा जलाइयो - जबकि त्यस वर्षको क्यालिफोर्नियामा झन्डै दोब्बर जति जलाइएको थियो।
जेफरी भन्छिन् कि क्यालिफोर्नियाका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको आवधिकताको कारण वनको डरको खतराबारे बढी सचेत हुन सक्छ, टेक्सनहरूले अझै पनि जंगलको आगोलाई सक्रिय खतराको रूपमा लिनुपर्दछ। उनले बस्ट्रोप काउन्टीको आगलागी एक्सएनयूएमएक्सबाट उद्धृत गरे जसले 2011 घरहरू ध्वस्त पारे र दुई व्यक्तिको ज्यान लियो।
जेफरी भन्छिन्, "कुनै खतरा जस्तै, यदि यो केहि बर्षहरूमा भएन भने मानिसहरूले यसलाई महत्त्वपूर्णको रूपमा सोच्न सुरू गर्दैनन्," जेफरी भन्छन्।
यस हप्ताको सुरूमा अस्टिन शहर काउन्सिलका सदस्यहरूले उनीहरूको भर्खरको बजेटमा वन्यजन्तु शमनका लागि करीव N 3.5 मिलियन अनुमोदन गरे।
टेक्सास ए एण्ड एम वन सेवाले विकसित गरेको यो उपकरण प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो जंगल फायर जोखिम पाउन सक्नुहुन्छ
आवासीय एक्सपोजर मान निर्धारण गर्न, CoreLogic पार्सल-स्तर डाटा स्वामित्व CoreLogic संग जोडी छ वन्य आगो जोखिम स्कोर प्रत्येक छुट्टै वन्य आगो जोखिम वर्ग भित्र समावेश प्रत्येक सम्पत्ति पहिचान गर्न। प्रत्येक आवासीय सम्पत्तिलाई संरचना मूल्याation्कनसँग मिलान पछि, मानहरू व्यक्तिगत भौगोलिक क्षेत्रहरूमा जोखिम वर्गद्वारा कुल हुन्छन्। अन्तिम परिणामहरूले जोखिममा रहेका आवासीय सम्पत्तिहरूको कुल संख्या, साथै ती सम्पत्तीहरूको कुल वर्तमान पुनर्निर्माण लागत मूल्य चित्रण गर्दछ।
30m ग्रिड सेल, सम्भावित CoreLogic तल खतराको पूर्ण समझ संग सशस्त्र युएस वाइल्डफायर मोडेल संरचनाको जोखिमको साथ इग्निशन स्रोतहरू, स्प्रेड र दमन सहित क्षतिको व्यापक एजेन्टहरूको संयोजन गरेर अगाडि जान्छ। दुबै जला र धुवाँ क्षतिको लागि जिम्मेवार छ, र 3.5 लाख stochastic घटनाहरू सम्भव हुन सक्ने प्रत्येक क्षति र नोक्सानीको अनुकरण गर्न समावेश गरिएको छ। यस मोडेलले मौसमको लागि आर्द्रता र प्रचलित हावाहरू पनि समावेश गर्दछ र एक वर्षमा उच्च वा कम-औसत जोखिमको लागि खाता समायोजनको लागि अनुमति दिन्छ जुन खडेरी, असाधारण वर्षा वा भर्खरको जलेको कारण हुन सक्छ। एक चोटि क्षति अनुपात गणना गरीयो, मोडेलले कुनै पनि र सबै बीमा सर्तहरू लागू गर्दछ आगो र धुवाँबाट हुने आर्थिक क्षतिको निर्धारण गर्न।